I-VPN boom: kungani kubalulekile ukuzisebenzisa? | Amagajethi Ezindaba
I-VPN boom: kungani kubalulekile ukuzisebenzisa?
Izindaba zamagajethi | 20/06/2022 16:15 | Aplicaciones
Ngokuhamba kwesikhathi, ama-Virtual Private Networks athandwa kakhulu. Aziwa kangcono ngesifinyezo sawo ngesiNgisi (VPN), lawa mathuluzi agunyazwe izigidi zabasebenzisi emhlabeni jikelele abawasebenzisayo ngezizathu ezahlukene. Esihlokweni esilandelayo sizobuyekeza kafushane ukuthi lobu buchwepheshe bumayelana nani nokuthi bungasisiza kanjani kuwebhu
1 Umsuka wama-VPN kanye nesimanje sabo
2 I-VPN nokuphepha
3 I-VPN nokufinyelela olwazini
4 I-VPN nokuzijabulisa
Umsuka wama-VPN kanye nesimanje sabo
Ezikhathini lapho Ukubaluleka kwamanethiwekhi omphakathi iya iba nkulu, ngakho-ke ukufinyelela ku-inthanethi nakho kukhudlwana, ukuba ne-VPN kungaba kubaluleke kakhulu. Njengoba sizobona ngezansi, le software ingasivikela ekuhlaselweni okuhlukahlukene kwe-inthanethi, futhi ithuthukise ulwazi lwethu lapho siphequlula iwebhu. Kodwa yonke indaba inesiqalo.
Ngaphambi landa i-vpnKuhle ukwazi okwengeziwe ngabo. Lobu buchwepheshe baqala ukusetshenziswa amanyuvesi, izinkampani kanye namalabhorethri ayefuna wonke amadivaysi angaphakathi abe nezinga elifanayo lokuphepha nokuvikela, kanye nokufinyelela kude kumafayela ahlukene. Amahhovisi amaningi namuhla ayaqhubeka nokusebenzisa lolu hlobo lwesoftware.
Manje, ukusetshenziswa kwama-VPN sekwandile namuhla ukuze sikwazi ukushintsha indawo yokuxhumana kwethu ku-inthanethi. Ngobuchwepheshe obuyinkimbinkimbi obuhambisa yonke ithrafikhi yewebhu emhubheni wangasese, kungenzeka ukuxhuma kuseva ye-VPN etholakala ngakolunye uhlangothi lomhlaba. Ngakho-ke, ikheli le-IP langempela lifihlwa elinye, okuwukuqiniswa okukhulu kokuphepha kanye nokufinyelela olwazini.
Maqondana nendaba ye- ubugebengu be-inthanethi, i-VPN yenza ngonya ngokusenza singabonakali kubahlaseli. Lokhu kubaluleka ekusetshenzisweni kwamanethiwekhi okwabelwana ngawo njengalawo asezindaweni zamabha noma ezikhumulweni zezindiza, isibonelo. Izimiso zokuphepha zalokhu kuxhumana ngokuvamile zincane, ngakho sonke isinyathelo esisithathayo ngaphakathi singarekhodwa futhi sisetshenziswe ku-akhawunti yethu.
Ngokuxhuma kuseva ye-VPN, asibonakali kwabanye abalingisi kuleyo nethiwekhi futhi asizuzi kuphela mayelana nokuphepha, kodwa futhi kukho konke okuhlobene nobumfihlo: akukho esikwenzayo okuzobhaliswa ngegama lethu, idivayisi nekheli le-IP, into eyaziswa kakhulu emhlabeni wewebhu olawulwa ngokwandayo.
I-VPN nokufinyelela olwazini
Ngakolunye uhlangothi, i-VPN iyithuluzi elihle ezindaweni nasemazweni lapho ukufinyelela kolwazi kuphulwa khona yiziphathimandla zikahulumeni kanye nezinkampani ezizimele.
Iphuzu lokulawula liwukuthi emazweni amaningi ukusetshenziswa kwamanethiwekhi we-VPN kuvinjelwe ngumthetho, okugcina kube ukuhlasela okunamandla nakakhulu kwenkululeko yokukhuluma. Ukusetshenziswa kwalawa manethiwekhi kuyisihluthulelo sokuthi abantu bafinyelele kukho konke okuqukethwe nolwazi abalufunayo ngaphandle kokulamula okuvela eceleni noma ukulawula idatha etholiwe.
Okokugcina, i-boom kuma-VPN ingabuye ichazwe ngokuzijabulisa kwe-inthanethi. Njengoba sibonile kuleli nothi, ngokushintsha ikheli lasesizindeni se-inthanethi loxhumano lwethu, sizokwenza abalandeleli nabalawuli bakholwe ukuthi sikwenye indawo. Lokho kuzosinika ukufinyelela ekusakazeni okuqukethwe kanye nokulanda amafayela esingakwazi ukuwathola ezweni lakithi.
Izingosi zokudlala eziku-inthanethi, izinkundla zokusakaza, nezindawo zokuthenga kuvame ukuvakashelwa kakhulu kusetshenziswa i-VPN.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Aplicaciones » I-VPN boom: kungani kubalulekile ukuzisebenzisa?
Siya echibini ne-Sonos Roam, umngane ongcono kakhulu ngezinsuku zasehlobo [Ukuhlaziya]
I-Oukitel WP19 entsha iza obala, enye indlela ukumelana kakhulu